TORITENY Alahady 23 Oktobra 2017 | FJKM Amboniloha
“Mahery vavaka ny vavolombelona marina”
II Mpanjaka 4 : 32 – 37 / Marka 11 : 20 – 24 / Kolosiana 1 : 9 – 14
Fitahiana noraisin’ilay vehivavy sonemita sy ny vadiny avy tamin’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Elisa Mpaminany dia ny nahazoany zanaka araka ny bokin’ny 2Mpanjaka 4 : 32 – 37 .
Ny olona mandray mpanompon’Andriamanitra dia mahazo valisoa tandrify azy.
Cf ( Hebreo 19 : 2)
Ny bokin’ny 2 Mpanjaka no isintonana lesona ho fahatanterahana sitrapon’Andriamanitra
I- Ampianarina ny olona hifanerasera amin’ny mpanompon’Andriamanitra
Ny mpanompon’Andriamanitra na antsoina koa hoe solon-tenan’Andriamanitra ety an-tany. Voaporofo teo amin’ny fiainan’izy mivady ny fahamarinan ’ izany ka raha narary mafy ny zanany dia nampandriany teo amin’ny fandriana natorian’i Elisa ary lasa izy nihazakazaka namonjy io Mpaminany io tany amin’ny toerana lavitra dia lavitra . Ny vavaka nataon’ity farany , dia midika ho famindrana aina , fampaherezana , fahavelomana vaovao ary dia velona soa aman-tsara ny zaza.
Lesona : Olom-boafidy nantsoina hitondra aina ho an’ny hafa ny mpanompon’Andriamanitra . Ny fifandraisana tsy tapaka amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka no hahatanteraka izany. Etsy andaniny, voahodidina fitahiana ihany koa ny olona mifanosona amin’ny mpanompon’Andriamanitra.
II- Na ozona na fitahiana : Marka 11 : 20
Raha napetrak’Andriamanitra eto ambonin’ny tany ny olona izay dia nohariny amin’ny hazo maniry , manantena vokatra Izy ka raha tonga ny fotoana izay hiotazany, ho faly Izy raha mioty ny vokatra fa fahatezerana kosa ho an’izay tsy ahitana afatsy ravina fotsiny .
Na ho an’ireo mpanompon’Andriamanitra , na ho an’ny vahoakan’Andriamanitra , ny tanjona dia ny hamoa voa tsara ka tsy handiso fanantenana ny Tompo . Ataovy ny asan’Andriamanitra , tezao ny olon’Andriamanitra ary koa ankatoavy ka araho tsara ny sitrapon’Andriamanitra .
Lesona : Tsy ny maha olona no atao ho sakana amin’ny fanatonana an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny mpanompony , ary koa tsy ny olana eo amin’ny fiainana no vato misakana tsy hanaovana tsara ny asan’Andriamanitra , fa eo ambany fifehezan’i Jesoa avokoa izany raha tena mahery amin’ny vavaka isika.
Fehiny : Isika tsirairay avy no ampiasain’Andriamanitra hitondra olona hiditra ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra . Ny vavaka no fitaovana tsara sy mahomby indrindra hananantsika hery sy faharetana amin’izany andraikitra napetraka amintsika izany ; Ny olona mahery amin’ny vavaka dia sady hamonjy ny tenany no hamonjy ny hafa ihany koa .
ANDRIANANTENAINA Hajaniaina Célestin, Mpitandrina